/ Products / Nootropics powder / N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) upfu
Rating: SKU: 6384-92-5. Category: Nootropics powder
MASHOKO aya ane maitiro ekugadzira uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweN-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder (6384-92-5), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) pfu iyo amino acid inogadzirwa inoshanda senge chaiyo agonist kuNMDA receptor, uye nekudaro inotevedzera maitiro eiyo neurotransmitter glutamate pane iyo receptor. Kupesana negutamate, NMDA inosunga uye inogadzirisa pamusoro apa inogamuchira chete, asi kwete mamwe ma glutamate receptors. NMDA inogadziriswa nemvura inogadziriswa iyo isingawanzo kuwanikwa mune zvisikwa zvipenyu. Yakatanga kugadzirwa muma1960. NMDA inofadza; hunhu uhwu hune mashandisiro muhunhu hwekutsvaga neuroscience
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) video yeupfu
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder basic Characters
Name: N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder
Molecular Kurema: 147.13
Storage Temp: Chengeta pa RT
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder mukusimudzira unyanzvi hwehuropi nekuwedzera kumwe
N-Methyl-D-aspartic acid powder Usage
Mutumbi webasa uchishandisa nzira iyi unowira pasi peshoko rekuti "lesion studies." Vatsvagiri vanoshandisa hupfu hweNMDA kune mamwe matunhu e (mhuka) huropi hwepfungwa kana musana uyezve vanoyedza hunhu hwekufarira, senge hunhu hunoshanda. Kana hunhu hukakanganiswa, zvinoratidza kuti mhuka dzakaparadzwa dzaive chikamu chenharaunda yeuropi iyo yakaita mupiro wakakosha mukutaura kwese kwehunhu. Mienzaniso yevanopikisa veNMDA powder receptor ndeye APV, dextromethorphan, ketamine, phencyclidine (PCP), riluzole, uye memantine. Ivo vanowanzo kunzi seNMDA powder receptor vanopikisa.
Pakanga pasina kuongororwa kwakawanda kunoitwa muNMDA powder kuvanhu uye kuti chidimbu chinonyanya kukosha chichave chei. Nhamba dzakasiyana zvakasiyana-siyana, nevamwe vanhu vanoti 50 mg pazuva ndeyepamusoro, asi zvimwe zvidzidzo zvakaedza pedyo ne2 g zuva rekushandiswa. Pamusana pekupesana kwakakura kwakadai mukuraira mazano, zvakakosha kutanga pasi uye zvino kuvaka zvichienderana nekuti zvinhu zvinonzwa sei.
Yambiro paN-Methyl-D-aspartic acid powder
Pasina tsvakurudzo yakawanda yakaitwa paNMDA powder, saka migumisiro yechirwere haisati yazivikanwa. Zvisinei chekutsvakurudza kuripo, kusava nemigumisiro yakaipa kune vanhu vezuva nezuva NMDA powder supplementation inoratidzika slim-to-none.
Pakave nekuongororwa kwakaitwa pamakumbo emakonzo akaparadzana apo NMDA powder yakashandiswa zvakananga kumatomu europi ayo akaita kuti sero rekufa. Asi kuwanikwa uku kwakave kwakaparadzwa zvachose kubva pakuenzana. NMDA powder inogona kuenzanisirwa sehurukuro, asi mikana yeyo inokonzera kushungurudzika kwevanhu mukati mevanhu nekuda kwekudarika kwepamusoro inenge isingakwanisi.
(NMDA powder) inopikisa amino acid. Pakuipedza iyo inoratidzwa kubatsira kubatsira kuwedzera kwekugadzirwa kweHymmone kukura, FSH neLH, zvichiita kuti ive testosterone yakakura yekugadzira chigadzirwa chekushandisa.
O-Methyl-D-Aspartic-Acid (NMDA powder) chimwewo chezvinhu zvikuru muRed Growth, Red Supplement's premium muscle building, kuwedzera simba uye testosterone kuwedzera kuwedzera.
(1) Chii chinonzi N-Methyl-D-Aspartic-Acid?
N-Methyl-D-aspartic acid poda inosungira kuNMDA powder receptor nzvimbo muuropi, kutevedzera zvinokonzerwa ne glutamate, iyo inonzi neurotransmitter inokosha mukati mehutano hwenheyo.
Apo NMDA powderRs inoshandiswa, inokurudzira kuchengetedzwa kwe Pregnenolone (P5); steroid hormone iyo inotangira mineralocorticoids, estrogens, androgens, glucocorticoids, neuroactive steroid uye progesterones. Kuwedzera mazinga emahomoni aya kunogona kuvandudza simba remagetsi, mafungiro nemamwe.
Kushandiswa kwenzvimbo dzeNMDA powder receptor kunokurudzira kushandiswa uye kushandiswa kwemhomoni yevanabolic kuburikidza ne-endocrine system.
Izvi zvinoreva kuti kuwedzerwa kweNMDA poda mabasa kunogona kukanganisa maitiro e testosterone, HGH (human growth hormone), LH (luteinizing hormone), FSH (follicle stimulating hormone), uye mamwe mahomoni anrogenic.
Isu tinoziva kuti NMDA powder receptors muuropi inobatanidzwa mukugadzirisa zvipupuriro zve testosterone uye zvinowedzera zvinokurudzira izvi zvinogamuchirwa zvakaratidzwa kuwedzera maitiro e testosterone muvarume vane mashoma.
(2) Kubatsirwa kweN-Methyl-D-Aspartic-Acid
• Kuvandudza mitambo
• Kuwedzera simba remhepo uye mafungiro
• Kunowedzera Libido
• Inowedzera Testosterone
• Kunomutsa LH, FSH, HGH mazinga
• Kunowedzera kugadzirisa basa
Nzira yekutenga NMDA powder: kutenga N-Methyl-D-aspartic acid powder kubva kuAASraw